FABRIC ACTIVEWEAR COMPRESSION IDEAL
Ny pataloha famatrarana sy ny fitafiana ara-panatanjahantena no vahaolana tonga lafatra amin'ny hetsika ara-panatanjahantena sy fanatanjahan-tena rehetra. Ny tery kely mifintina dia manome fanampiana ny antsasaky ny vatanao manontolo. Rehefa mitafy ny leggings mihazakazaka na mihazakazaka mafy isika dia toy ny manana paompy mihodina amin'ny feny sy glutes izay hanome anao fampivoarana mandritra ny fampihetseham-batana ataonao!
FABRIKA TSARA NY FAMPANDROSOANA
Ny famatrarana famatrarana dia mametra ny hetsiky ny hozatra be loatra izay mitranga mandritra ny fihazakazahana, ny fivezivezena, ny bisikileta na ny yoga mandritra ny fitehirizana angovo mba hanomezana fahombiazana bebe kokoa sy fiaretana bebe kokoa. Izy ireo no leggings famatrarana farany na pataloha teritery. Na inona na inona fanazaran-tena ataonao, ny fitaovan'ny famatrarana dia hanampy anao ho tsara indrindra!
TSY MAHARITRA, FABRIKA LEHIBE IREO
Ny fampiasana pataloha famatrarana dia mampihena ny fanaintainana na mandritra na aorian'ny hetsika ara-batana mahery vaika, ahafahanao manao fanatanjahan-tena lava. Ny fanatsarana ny rà mandriaka avy amin'ny pataloha famatrarana antsika dia manome antoka fa ho sitrana haingana kokoa ary hisorohana ny harerahana.
FABRIC SMART, FABRIC MAFANAFANA
Ny lamba 4-lavalava azo zahana dia voafidy tsara hiantohana ny fampiononana faran'izay betsaka - fahasosorana na fikoropahana. Ny lamba dia mamafa ny hatsembohana haingana koa, mitazona ny hoditrao ho maina sy hahazo aina. Mora ny manadio ny akanjontsika ary mitazona ny endriny izy io na dia efa nanasa maromaro aza. Ary, ny fihenan'ny vatan'ny vatana dia manome anao fijery mendri-piderana ary ankasitrahana ankoatra ny fitafiana an'iza.